Tanintharyi Region High Court - တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
တရားရုံးများ၏ Website လိပ်စာများ တရားရုံးများ
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်တွင်တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း တရားရုံးများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရားရုံးများ၊ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မြို့နယ်တရားရုံးများနှင့် ဥပဒေအရတည်ထောင်ထားသော အခြားတရားရုံးများကို တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကိုလည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၅ နှင့် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄ တို့အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏ ဒုတိယအမြင့်ဆုံး တရားရုံးဖြစ်ပါသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏မြို့တော် ထားဝယ်မြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်အဆောက်အဦကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦ:ခင်ဇော်က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်နှင့် ထားဝယ်မြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦသစ်ကို ထားဝယ်ခရိုင်တရားရုံးနှင့် မြေကွက်ချင်းထိစပ်နေသော (၃) ဧက အကျယ်အဝန်းရှိ မြေကွက်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ အဆောက်အဦ၏ အနောက်ဘက်တွင် ထားဝယ်မြို့နယ် တရားရုံးနှင့် ထားဝယ်ခရိုင်တရားရုံးတို့တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိပါသည်။ အဆောက်အဦ၏အရှေ့မျက်နှာစာတွင် ရေးလမ်း၊ တောင်ဘက်တွင် သုခလမ်းသွယ်ရှိပါသည်။
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ခရိုင်တရားရုံး (၃) ရုံးနှင် မြို့နယ်တရားရုံး (၁၀) ရုံးကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။ ခရိုင်တရားရုံးများမှာ ထားဝယ်ခရိုင်တရားရုံး၊ မြိတ်ခရိုင်တရားရုံးနှင့် ကော့သောင်းခရိုင်တရားရုံး တို့ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်တရားရုံးများမှာ ထားဝယ်မြို့နယ်တရားရုံး၊ လောင်းလုံးမြို့နယ် တရားရုံး၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး၊ ရေဖြူမြို့နယ်တရားရုံး၊ မြိတ်မြို့နယ်တရားရုံး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်တရားရုံး၊ ပုလော မြို့နယ်တရားရုံး၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်တရားရုံး၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်တရားရုံးနှင့် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်တရားရုံး တို့ဖြစ်ပါသည်။
(၂၁)ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အတွေ့အကြုံများ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း
တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်(၄) ရာထူးနေရာများ ရွေးချယ်ခန့်ထားရေး ရေးဖြေစာမေးပွဲအချိန်စာရင်း
(၂၀)ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အတွေ့အကြုံများ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း
Video Conferencing စနစ်ဖြင့် လျှောက်လဲချက်ပေးခြင်း
တရားစီရင်ရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း
နှစ်စဉ် မှုခင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ
Copyright © 2019 High Court of Tanintharyi Region. All Rights Reserved.
Email : tanintharyihc@gmail.com